Madaxweynaha Uganda “Halla tababaro dhallinyarada si ay isaga difaacaan Shabaab” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Uganda “Halla tababaro dhallinyarada si ay isaga difaacaan Shabaab”
28th April 2015 A warsame Af Soomaali 0
Ugandan President Yoweri Kaguta Museveni gestures as he addresses delegates during the first India-Africa Forum Summit in New Delhi on April 9, 2008. India sought to deepen strategic and economic ties with resource-rich Africa as it held its first summit meeting with African leaders and sweetened the pot by offering financial help.Indian Premier Manmohan Singh, playing host to the presidents of five African states and senior leaders of nine other countries, announced export tariffs cuts that he said would benefit 34 of Africa's 53 countries. AFP PHOTO/Findlay KEMBER
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Yganda, Yoweri Museveni ayaa faray hay’adaha amaanka iney tababar milateri siiyaan dhallinyarada dalkaas, si ay isaga difaacaan Alshabaab.
Sida uu qoray, Wargeyska ay dowladda leedahay ee New Vision, Mr Museveni ayaa yiri “Inkastoo Alshabaab la jebiyey, haddana dadka Uganda waxey u baahan yihiin iney naftooda ka ilaaliyaan kuwa soo weeraraya”.
Dalka Uganda waxaa Soomaaliya ka jooga ciidan gaaraya 6,000 askari oo ka mid ah howlgalka Midowga Afrika ee (AMISOM).
Sanadkii 2010, Al-Shabab ayaa weerar qaraxyo ah ku qaaday goob ciyaaro lagu daawanayey oo ku taalla magaalada Kampala, waxaana ku dhintay 76 qof.
Alshabaab ayaa dhowr jeer aad ugu hanjabay dalka Uganda, waxaana booliska iyo sirdoonku inta badan ku jiraan howlgal feejignaan ah.
Bishii December ee sanadkii tegay, labo wadaad oo Muslim ah ayaa lagu dilay caasimadda Ugnda ee Kampala.
Bishii hore Maarso 2015, waxaa Kampala lagu dilay haweeney Xeer Ilaaliye aheyd oo la oran jiray, Joan Kagezi oo dacwad ku oogeysay dad ku eedeysan qaraxyadii Uganda ka dhacay sanadkii 2010.
Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa laamaha amaana faray iney daah ka rogaan qorshe dadka lagu barayo qaabka ay naftooda u difaacaan, inkastoo uusan faahfaahin badan bixin.
Afhayeenka milateriga Uganda, Col Paddy Ankund oo warbaahinta la hadlay ayaa tibaaxay inuusan jirin qorshe baahsan oo lagu askareynayo dadka shacabka ah, balse dhallinyarada la barayo qaabka la isu difaaco haddii lasoo weeraro.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ku wajahan magaalada Garowe
Madaxweyne Xasasn: Shabaab weerarro hor leh ayay la damacsan yihiin Muqdisho